By Staff reporter | 22 Apr 2020 at 16:43hrs
"I cannot pre-empt the final price for May 2020, we will use the FOB (free on board) of refined fuel up to end of April 2020 and any other considerations from government and other stakeholders. However, the fall in crude oil is expected to filter to the FOB prices of fuel imported into Zimbabwe," Mazambani told NewsDay Business.
In Zimbabwe's fuel cost build-up, the main determinant to the final pump price is the FOB price — the price at which fuel is charged by local traders as determined by international market forces at the port of delivery.
"I hope you are aware that Zimbabwe imports refined fuel, not crude and that the fuel we use is imported in advance not spot purchase. Adjustments in fuel prices will be done according to the law. If there is any downward movement, it will be reflected in the next price review," Mazambani said.
"Any adjustment in fuel prices will be done according to the law taking into account that the fuel in Zimbabwe now was procured before the fall in prices," Mazambani said.
"I'm not sure where you get it from. Zimbabwe prices are adjusted once a month starting December 2019. Get a copy of SI 270 it will outline how prices for fuel are set and by when," Mazambani said.